CR7 ले माराकेच, म्याड्रिड र न्यू योर्कमा नयाँ होटलहरू खोल्ने छ यात्रा समाचार
इसाबेल कातालान | | आवास, हाम्रो बारेमा
यदि त्यहाँ विश्वव्यापी घटना को कोटीमा प्रशंसकहरु संग जोडिएको खेल छ भने, यो फुटबल हो। क्लब र फुटबलरहरूले यस्तो जोश जगाउँदछन् कि यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि खेलकुदका राजालाई समर्पित थीमयुक्त होटेलहरूसमेत खुले।
खैर, केहि समयको लागि अब यूरोपियन फुटबलको एक तारा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यो प्रवृत्तिमा सामेल भएको छ र धेरै होटल खोलेको छ जसमा खेलकुद, स्वस्थ जीवन र मुख्य विषयको रूपमा आफ्नै व्यक्तित्व रहेको छ।
लिस्बन, फन्चाल, म्याड्रिड, न्यू योर्क र अब माराकेच शहरहरूको सूचीमा सामेल छन् जुन सीआर hotel होटेलले डिजाइन गरेको छ। उनीहरु के जस्तै छन्?
6 सीआर hotels होटेल के के हुन्?
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पाँचौं होटेलको निर्माण कार्य भैरहेको छ र यसको उद्घाटन २०१ 2019 मा पेस्टाना सीआर Mar माराकेचको नाममा निर्धारित छ। यो सम्भवतः यसका बाँकी होटेलहरू जस्तै समान पछ्याउने छ तर मोरक्कन शैलीको स्पर्शले अफ्रिकी देशका लागि फुटबलरको स्नेह प्रख्यात छ।
Pestana CR7 माराकेच शहरको एवेन्यू M मा अवस्थित हुनेछ, कला ग्यालरीहरू, लक्जरी पसलहरू, फेसनदार रेस्टुरेन्टहरू र सुन्दर बगैंचाहरूले घेरिएको सबैभन्दा अनन्य क्षेत्रमा।
फुटबल खेलाडीले म्याड्रिडको लागि मन परेको होटेलले यस बर्ष यसका ढोका खोल्न सक्छ र प्लाजा मेयरमा स्थापना हुनेछ। औसत मूल्य प्रति रात २०० यूरो हुनेछ र यसमा rooms 200 कोठा हुनेछन्, जसमध्ये १२ सुइट हुनेछ।
एक जिज्ञासाको रूपमा, विचार पहिलो मैड्रिडमा खोल्ने CR7 होटलको लागि थियो, तर केही शहरी कठिनाइ र नोकरशाही ढिलाइको कारण, स्पेनिश राजधानीमा स्थापनाको उद्घाटन स्थगित गर्नुपर्‍यो।
Pestana CR2018 न्यु योर्क र Pestana NY पूर्वी साइड र Pestana Newark २०१7मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा खोल्न को लागी तालिका छन्।, जसले देशमा 380० भन्दा बढी नयाँ कोठा थप गर्दछ।
दुबै संयुक्त राज्य अमेरिका र म्याड्रिडका संकलन ब्रान्ड मुनि होटलहरू हुनेछन्, अधिक समकालीन र शहरी शैलीको साथ एक विशिष्ट दर्शकहरूको उद्देश्यका साथ।
Pestana CR7 लिस्बोवा लाइफस्टाइल होटेल र अन्य आतिथ्य प्रोजेक्टहरूको साथ हामी बेक्सालाई यसको पतनबाट मुक्त गर्न र यसलाई पुनर्जन्म बनाउन चाहन्छौं।
यो बुटीक होटेल हो जुन rooms० कोठा र शहरको बीचमा डिलक्स सुइट हो, यो प्रतीकात्मक Praça do Comércio बाट केही मिटर। कोठाको सजावट कार्यात्मक र न्यूनतम छ तर खेलको सन्दर्भ लगातार छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको सर्वव्यापी व्यक्तित्व मार्फत मात्र होइन तर भिन्टेज पोस्टरहरूको उपस्थिति मार्फत होटेल रिसेप्शनमा च्याम्पियनशिपहरू, लबीमा टेबल फुटबल वा बारमा विशाल स्क्रीनहरू ताकि तपाईं एक खेल याद गर्नुहुन्न।
थप रूपमा, Pestana CR7 लिस्बोवा लाइफस्टाइल होटल्समा एउटा होम अटोमेसन प्रणाली छ जसले तपाईंलाई कुनै पनि डिजिटल उपकरणबाट कोठाको प्रकाश वा तापक्रम नियन्त्रण गर्न, संगीत छनौट गर्न वा टेलिभिजन कार्यक्रम परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।
र स्वस्थ जीवनलाई प्रोत्साहित गर्ने होटेलमा, तपाईं जिमलाई हराउन सक्नुहुन्न जहाँ ग्राहकहरू व्यायाम गर्न सक्छन् र उनीहरूको शारीरिक अवस्था सुधार गर्न सक्छन्। प्रत्येक व्यक्तिको लागि उपयुक्त व्यायाम कार्यक्रमको साथ होटलले प्रदान गरेको व्यक्तिगत ध्यानको लागि धन्यवाद।
यसको नाम पेस्ताना सीआर Fun फन्चाल हो र यो मडैराको राजधानीमा स्थित छ र ocean्गलाग्दो रातो भवनमा समुद्रको अनुहार छ कि स्विमि pool पूल, स्पा, फ्राँचलको सीआर Muse संग्रहालयमा नि: शुल्क पहुँच छ। र फुटबलर आफैले डिजाइन गरेको बाहिरी जिममा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रयोग गर्ने सम्भावना।
Pestana CR7 फन्चाल भित्र तीन कोठाका कोठाहरू छन् जुन समकालीन र खेलकुद डिजाइन संयोजन गर्दछ। तिनीहरूसँग सबै प्रकारका आरामहरू छन्, ध्वनिप्रूफ गरिएको छ र फुटबल स्टेडियम मैदानको सम्झनामा कृत्रिम घाँस कोरिडोरको माध्यमबाट डिजिटल पहुँच गरिन्छ। प्रत्येक ढोकामा रोनाल्डोको विशाल फोटो रहेको छ र शयनकक्षहरूमा उसको जीवनका चित्रहरू छन्।
यसबाहेक, ग्राहकहरूको पनि होटलको छतमा रहेको टेरेसमा पहुँच छ, जसले फन्चाल, यसको खाडी र मरीनाको दर्शनीय दृश्यहरू प्रदान गर्दछ।
सीआर hotels होटेल के के हुन्?
सीआर hotels होटेल पोर्तुगाली स्टार र पेस्टाना होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स समूहको बीचको गठबन्धनको नतिजा हो, जुन सम्पत्तीहरूको सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार हुन्छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको होटेलहरूको ग्राहक प्रोफाइल १ 18 र 35 of वर्ष बीचका युवाहरू हुन् जुन प्रविधि, स्वस्थ जीवन र सामाजिक जीवनमा रुचि राख्छन्।
मूल्यहरू कोठामा निर्भर गर्दछ प्रति रात २ and० र १,२250० युरो बीच। तिनीहरू अत्यधिक मूल्यहरू जस्तो लाग्न सक्छ, तर यी--तारे होटेलहरू हुन् जुन सबै प्रकारका कम्फर्ट र नवीनतम टेक्नोलोजीसँग सुसज्जित छ। यद्यपि त्यहाँ धेरै युवाहरू छन् कि तिनीहरू ती कम खर्चमा पर्यटनको लागि अधिक विकल्प लिन जब कि ती मूल्यहरु किन्न सक्ने छन् भनेर शंका गर्छन्।
यद्यपि ब्रान्डले पाँच बर्षमा होटलहरूको संख्या दोब्बर गर्ने योजना बनाएको छ। अर्को खुला मिलन र इबिजा साथै एशिया र मध्य पूर्वमा हुने गरी अफवाह गरिएको छ किनभने त्यहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकदम लोकप्रिय छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » आवास » CR7 ले माराकेच, म्याड्रिड र न्यू योर्कमा नयाँ होटलहरू खोल्नेछ